DF Soomaaliya oo maanta soo saartay go'aan dalka looga mamnuucay...! - Caasimada Online
Home Warar DF Soomaaliya oo maanta soo saartay go’aan dalka looga mamnuucay…!
DF Soomaaliya oo maanta soo saartay go’aan dalka looga mamnuucay…!
Muqdisho (Caasimada Online)Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah mamnuucday in gudaha dalka laga xuso ciiddaha masiixiga.
Idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho ayaa caawa laga akhriyay wareegto kasoo baxday Wasaaradda garsoorka iyo Arrimaha diinta oo lagu mamnuucayo in gudaha dalka laga xuso ciiddaha Kirishtaanka
Go’aankan ayaa waxaa si wadajir u soo saaray agaasimaha guud ee wasaarada garsoorka iyo arrimaha diinta iyo agaasimaha waaxda diint,kuwaasoo shir ku yeeshay Muqdisho, waxaana ku faah-faahiyeen in ciiddahan ay gaar u lee yihiin dadka aan muslimka ahayn ee heesta diinta Kirishtaanka.
Agaasimaha waaxda arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Shiikh Cali Maxamuud ” Shiikh Cali dheere” ayaa yiri“Umadda islaamka waxaan la socon siineynaa in maalmahan ay socdeen feesto sanawi ah oo ka bilaabanaysa 25-ka bishaan oo ah xuska ciidda masiixiga, marka bulshada si hufan ula socdeen xuska masiixiga ah in aan la sameyn karin”
Ugu dambeyn waxaa la amray hey’addaha ammaanka dalka in aan dalka laga xusi karin, waxaana shacabka loogu baaqay in ay ka dheeraadaan goobaha xafladaha lagu qabanaayo.
Ma cadda wax yaabaha keenay go’aankan sidan u culus in dowladda ay u soo saartay, balse waxaa sheegis mudan in magaalada ay ku soo laabteen Soomaali badan oo ka timid waddamada qurbaha.